Ny mpanjifa dia mitsidika ny fandrefesana andrana momba ny foam fingotra
Ny 18 martsa 2016. Tongasoa ny mpanjifa mitsidika ny orinasa. Manana rafitra fanaraha-maso hentitra izahay, nitsidika ny laboratoara ny mpanjifanay. Taorian'ny andro vitsivitsy, ny valin'ny fanandramana dia naneho fa ny tondro rehetra dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa, tena afa-po tamin'ny vokatray izy ireo.
Ny mpanjifa Serbia dia mitsidika ny orinasa fingotra vita amin'ny foam
Tamin'ny 7 Janoary 2016, tonga tany Shina ny mpanjifa Serbia, tena tsara fanahy izahay amin'ny fampiantranoana ireo vahiny manan-kaja. Liana tamin'ny foam fingotra anay izy ireo ka nitsidika ny vokatray izahay. Rehefa avy nitsidika, dia afa-po tanteraka ny mpanjifanay tamin'ny foam fingotra. Niresaka momba ny antsipirian'ny fifanekena nataon'izy ireo izahay ary nahafinaritra ny fiarahana.
Ny mpanjifan'i Afrika Atsimo dia mitsidika ny orinasanay
Tamin'ny 20 Desambra 2015. Nitsidika ny orinasanay ny mpanjifan'i Afrika Atsimo. nitarika ny mpanjifanay hitsidika ny atrikasa famokarana sy ny trano fanatobiana entana izahay. Manana fotoana mahafinaritra miaraka izahay, Ary koa, nanantena izahay fa hanana fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ny ho avy.
Ny mpanjifa italiana dia mitsidika ny ozininay rock wool
Tamin'ny 13 aogositra 2015. Nitsidika ny orinasan'ny volon'ondry vatolampy ny mpanjifa Italiana, tonga tao amin'ny orinasanay izy ireo mba hanao fitiliana vokatra vita amin'ny volon'ondry Glass. Manana tsipika famokarana 8 ho an'ny volon'ondry fitaratra izahay ary manana rafitra fitantanana kalitao tonga lafatra. Tena natoky ny kalitaon'ny volon'ondry fitaratra ny mpanjifa. Niresaka momba ny antsipirian'ny fifanarahana nataon'izy ireo izahay rehefa avy nijery ny orinasa.
Ny mpanjifa Arzantina dia mitsidika ny orinasanay
Tamin'ny 24 Jona 2015. Tonga nitsidika ny orinasanay ny mpanjifa Arzantina, ity no mpanjifanay lehibe indrindra ary nanao raharaham-barotra maro izahay. Ny kalitaon'ny vokatra fototra amin'ny Glass Wool, Rock Wool ary Rubber Foam Insulation dia ekena miaraka. Noho izany dia manao baiko lehibe momba ny volon'ondry fitaratra, volon'ondry rock ary foam fingotra izy ireo.
Manatrika ny Canton Fair ny orinasanay
Tamin'ny 15 aprily 2015 - 19 aprily 2015, dia nandray anjara tamin'ny Canton Fair izahay, mba hanitarana ny fantsom-pivarotanay ary hibodo haingana ny tsena ao an-trano sy any ivelany. Tongasoa eto ny mpanjifa rehetra mba hitsidika ny trano heva sy miresaka raharaham-barotra.
Ny mpanjifa Bangladesh dia mitsidika ny orinasanay amin'ny volon'ondry fitaratra
Tamin'ny 19 Novambra 2014, nitsidika ny orinasanay ny mpanjifa Bangladesh izay nihaona taminay tao amin'ny fampirantiana Shanghai. Tamin'ity indray mitoraka ity, nitarika ny mpanjifanay hitsidika ny atrikasa famokarana sy ny trano fanatobiana entana izahay, faly tamin'ny volon'ondry fitaratra izy ireo ary niomana hanamarina ny baiko. Niresaka antsipiriany manokana izahay. Tena nahomby ny fiaraha-miasa!
Ny orinasanay dia manatrika ny fampirantiana Shanghai
Tamin'ny 30 Mey 2014 - 2 Aprily 2014. Nanatrika ny Fampirantiana Shanghai ny BROAD GROUP (insulation). Ny fampirantiana efatra andro dia nahasarika mpanjifa sy mpiara-miombon'antoka amin'ny kalitao ambony sy ny serivisy matihanina, maro ny olona any ampitan-dranomasina no tena afa-po amin'ny volon'ondry fitaratra sy ny volon'ondry rock. Manantena ny hanorina fifandraisana ara-barotra maharitra amin'ny orinasanao tandroka!